v1. ပြည်သူ့ သဘောထားမပါ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ကြံ ၂၀၀၈ အခြေခံ
လူသားဘ၀အဖြစ်ကဆိုး ကိုယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လည်း ပျောက်တဲ့ ဒီအလက်ရှင်
အတင်းအကျပ် ချုပ်ကိုင် ခိုင်းသမျှလုပ်ရန် လမ်းစဉ်တွေထုတ်ပြန် .. ..
ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ အလင်းဆက်. ခမိခဆဲမှ ဖြန့်ဝေပါသည်။
ပါတီဆယ်ကိုယ်ခွဲတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ Download လုပ်ချင်ရင်.. CLick